Literature | Dr. Nawa Raj Subba's Home page
July 12, 2018 nrsubba
(कृति परिचय तथा समीक्षा)
यो प्रश्न पुस्तकका लेखक डा. तुलसी भट्टराईको हो । यो प्रश्न मेरो पनि हो । अनि यो प्रश्न समस्त लेखकहरुको हो । त्यत्ति मात्र हैन यो जिज्ञाशा पाठकको समेत हो । नपत्याए फेसबुकका वालहरुमा पोतिएका अक्षरहरु हेरौं ! लेख्नमा को भन्दा को कम छ र । अलि जान्नेले लामो पाराले लेख्छन्, सिकारुले अलि छोटो लेख्छन् । लेख्न नसक्नेले फोटो खिचेर तस्बिर फेसबुकवालमा राखेकै छन् । यिनीहरु अभिव्यक्तिकै स्परुपहरु हुन् ।
आज म लेखक डा. तुलसी भट्टराईको निबन्धसङ्ग्रह ‘म किन लेख्छु !’ भित्रका केही रचनाहरुबाट प्रभावित भएर हामी सबै पाठकलाई चासो र काम लाग्ने केही गुदी कोट्याएर यो छोटो समीक्षात्मक लेखमा राख्तैछु । हुन त पुस्तक अम्बाजस्तै क्वाप्पै खाए पनि हुने गरी स्वादिलो छ । ती सबै परिकार पस्कन म सक्दिन होला । त्यसैले ओखर फुटाएर मसित जेभएको मनभित्रको कनकुर्नीले गुदी कोट्याएझैं गर्दैछु । भनिहालें नि, यो कृतिलाई भान्सामा तुलना गर्दा सिंगै परिवारलाई पुग्ने भडुमा पाकेको तातो भातजस्तो छ । म भान्सेजस्तो पुन्युले पस्कने अवस्थामा नभएर फलैंचाको डिलमा बसेर यसो ओखरदाना फुटाएर गुदी आफू पनि खाने र छेऊछाऊमा आउनेलाई पनि बाँड्ने रुपमा मात्र प्रकट भएको हुँ । Continue reading ‘म किन लेख्छु !’ →